Android 7.0 Nougat Review - News Fitsipika
Saro-takarina ambonin'ny fanovana, anisan'izany ny fanatsarana ny fampahatsiahivana sy ny tsara kokoa multitasking, hanafina fanatsarana goavana ambaniny ao amin'ny dingana mafy ho an'ny Android
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Android 7.0 Nougat famerenana: bateria intsony ny fiainana sy ny hetsika haingana” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com tamin'ny Alatsinainy 22 Aogositra 2016 17.00 UTC
Android 7.0 Nougat dia ny vaovao Google dikan-miasa ny finday rafitra, ampiasain'ny an'arivony tapitrisa fitaovana manerana izao tontolo izao.
Izany dia manasongadina bateria intsony ny fiainana, multitasking kokoa ary mahay fampahatsiahivana ao amin'ny slimmed, ka dia voadio Android traikefa - manaraka ny asa atao amin'ny tamin'ny taona lasa Malagasy Bible 6 Marshmallow
Izany haingana, polished kokoa sy amin'ny fomba malefaka-tsara traikefa rehetra-manodidina. Apps mametraka haingana kokoa, ny OS dia mety ho kely kokoa ny habeny sy ny fanampim-baovao ny Android azo nametraka amin'ny lalitra, nefa tsy mba hiandry ny 10 minitra raha reboots, raha manana fitaovana vaovao. Ny vaovao Graphics Vulcan API rafitra ihany koa fa tsara kokoa voaendy amin'ny lalao fampisehoana sy Nougat dia hanohana ny Daydream Google virtoaly zava-misy rafitra, farany.
Nougat dia tsy, na izany aza, lehibe maso overhaul ny Android. Ireo izay efa nampiasa Marshmallow amin'ny misy ny Rohy Google finday avo lenta na fitaovana kely teny an-dalana ny fanovana ny Android, toy ny OnePlus 3, dia hatrany manaiky izany.
Izany dia nitarika famerenana mampiasa mialoha famoahana dikan-Nougat mihazakazaka amin'ny Google Rohy samihafa sy Pixel fitaovana, toy ny zavatra madinika toy izany ny sasany dia mety tsy hitovy amin'ny famokarana namoaka dikan-Nougat androany.
Nougat mahatonga haingana valin-toerana misy anao ho an'ny ankamaroan'ny fifandraisana mifototra amin'ny fampahatsiahivana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny ankamaroan'ny asa dia lasa tamin'ny ambadiky ny sehatra, fa ny iray mazava fiovana ao Nougat dia ny fampahatsiahivana. Ry zareo ankehitriny malefaka sy midadasika kokoa, mameno ny manontolo sakan'ny lamba eo amin'ny smartphone, ary niaraka mivantana samy hafa, izay rava noho ny Marshmallow toerana latsaka ny karatra-tahaka ny tarehin'ny. Multiple fampahatsiahivana avy amin'ny fampiharana izany Mitamberina koa miara-, izay manadio ny fampahafantarana alokaloka, ary mahatonga mora kokoa ny mahita izay no Indray mito ary handroaka faobe.
Ny lehibe indrindra ho an'ny fampahatsiahivana asany fiovana, na izany aza, dia ny midadasika kokoa horonan-taratasy avy haingana namaly fiasan'ny. Google ny Apps toy ny mpitondra hafatra sy Hangouts efa nanana valin-endri-javatra haingana nandritra ny fotoana kelikely, fa ankehitriny ankapobeny fifandraisana rehetra dia tokony hanana fampiharana ny endri-javatra.
Ireo mpampiasa dia afaka namely namaly avy amin'ny fampahafantarana sy nitendry ny hafatra mivantana ho any amin'ny efajoro eo ambany ny fampahafantarana, izay ihany koa ny mampiseho kely Fizaha Snippet ny tantaran 'ny resaka raha tsy nanokatra ny fampiharana ny farany hatramin'ny valin-.
Haingana haingana toggles
Ny dingana voalohany amin'ny fampahafantarana alokaloka handrava ny ankehitriny dia ahitana ny toerana ambony ny velona toggles, izay avy eo dia nisintona nidina indray hita be ny rehetra. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Mihoatra noho ny fampahatsiahivana Google ihany koa ny nametraka ny sary masina iray andalana ho toggling endri-javatra toy ny Wi-Fi, Bluetooth, lamba fihodinan'ny ary mitovy, izay azo haingana hohainoana tsy fanitarana ny feno haingana napetraka ny toggles. Tsy mampihena ny isan'ny swipes ilaina mba hiala eny Wi-Fi, ohatra, iray ary dia tsotra, manampy koa vaovao.
Afaka manovanova izay hitan'ny misy, ny manova inona ao an-tampon'ny mailaka feno toggles pane. Mitaritarika nidina avy any an-tampon'ny amin'ny rantsan-tananao roa mbola manokatra ny feno toe-javatra haingana pane amin'ny iray mihetsika.
Multi-varavarankely mahatonga Android takelaka mahasoa kokoa noho ny mamokatra sy azo ampiasaina na amin'ny tontolo na Mombamomba ny mpanoratra. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Multi-baravarankely, na ny ilany-by-lafiny fanohanana mivaky efijery, dia ny lehibe hafa koa asany vaovao. Misy fomba telo hampavitrika azy. Fanindriana sy mihazona ny antsoina hoe bokotra iray Overview fampiharana ny efijery ampiasaina mitalaho ny vao haingana Apps lisitry ao mivaky-efijery tsirambina ny mifidy ny fampiharana faharoa mba hitafy efijery. Azonao atao ihany koa ny manao izany avy amin'ny vao haingana nampiasa fampiharana Lisitry ny taping sy fihazonana iray amin'ireo fampiharana ao amin'ny lisitra sy mitaritarika ho any an-tampon'ny efijery na amin'ny ankavia na ankavanana, raha amin'ny lafiny tontolo, mamela anao haka ny hafa rindrambaiko avy amin'ny lisitra.
Ny fomba miafina mampandeha ao amin'ny System UI Tuner miasa amin'ny alalan'ny swiping teo amin'ny lamba avy amin'ny Overview bokotra.
Ary indray mandeha amin'ny fivakisana-efijery fomba, Nougat mitondra tena toy izany koa ny Windows sy ny iOS. Ireo mpampiasa dia afaka hisintona ny mainty barany afovoany mba hanova ny haben'ny ny fivakisana, na hanesorana azy tanteraka. Fanindriana sy mihazona ny Overview bokotra, izay mampiseho toy ny ampahany roa, rehefa mavitrika, dia hanafoana ny multi-varavarankely koa.
Portrait multi-varavarankely eo amin'ny smartphone fomba dia tsy tena ilaina, fa ny tontolo raraka-efijery dia mety ho mahasoa amin'ny fitaovana lehibe kokoa. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Izany asa tena tsara, amin'ny efa ho isaky ny fampiharana manohana izany. Ihany no kely vitsy ny fampiharana mavitrika manakana izany, ary izay mety ho havaozina ho ela hanohana multi-varavarankely.
Tena endri-javatra izay tokony ho teo nandritra ny fotoana ela ho an'ny Android takelaka ary mahatonga azy ireo bebe kokoa tahaka ny asa mamokatra milina. Tena tsy ilaina ho an'ny finday avo lenta, na dia tontolo multi-varavarankely eo amin'ny fàfana lehibe-phablets dia mety ho ilaina amin'ny toe-javatra izay tokony ho foana ny maso amin'ny zavatra roa niara-, toy ny sarintany sy ny resaka.
Double paompy topy maso ny mifamadika ny farany indrindra fampiharana
Double-nipaipaika ny Overview bokotra koa mifamadika mahitsy ho amin'ny farany-ampiasaina fampiharana, izay mahatonga bouncing eo amin'ny roa Apps be haingana kokoa. Dika soratra na ny rohy eo amin'ny fampiharana haingana ankehitriny. fitaovana hafa, anisan'izany ny OnePlus 3 efa nanana endri-javatra io nandritra ny fotoana kelikely, saingy tsara ny mahita izany mofo ho Android.
Bateria intsony ny fiainana noho ny mbola ho rendremana 2.0
Ny iray amin'ireo tsara indrindra potika momba ny Android 6.0 Marshmallow no fampidirana ny doze, ny endri-javatra izay nanampy afa-bateria raha ny telefaonina na ny takelaka tsy nampihetsi-po, toy ny hoe apetraka amin'ny latabatra. Tsy nanao fiovana lehibe mba standby bateria fiainana.
Android 7.0 Nougat mampihatra izany endri-javatra bateria-ny fanolorana ny rehefa ny telefaonina no nampihetsi-po koa. Raha ny lamba fanakonana dia eny, Nihamafy be Nougat manana fanaraha-maso ny zavatra mety ary tsy afaka miditra angon-drakitra, Ahoana matetika ary impiry izany nanaitra ny telefaonina ny. Ny vokany dia eo 15 ary 20% bateria intsony ny fiainana ao ny fitiliana amin'ny Rohy 6P.
Endrika fankatoavana fanatsarana
Nougat kokoa ny smartlock Android endri-javatra, manao face mifanitsy be haingana sy marina kokoa. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Google ny hidin-trano mahay endri-javatra efa manodidina nandritra ny fotoana kelikely. Izy ireo mampiasa ny fitambaran'ny Sela Mpandray Hafanana hahafantatra raha hamono ny efijery hidin-trano, ary rehefa mba hahazoana antoka ny passcode ilaina foana.
Endrika fankatoavana efa azo nandritra ny fotoana kelikely, fa ny rafitra no itokisana face nihatsara be hatramin'ny Android 6.0 Marshmallow, izay ilaina indrindra ho an'ny takelaka sy ny fitaovana hafa tsy misy tondro scanner. Nampiasa ny Pixel C, ny rafitra niala kely ilaina amin'ny fotoana hafahafa rehefa niasa ny mamoha ny fitaovana momba ny 80% ny fotoana.
Raha ny tena izy, ny onlytimes dia tsy nahalala ny tavako dia rehefa manao Sunglasses aho ary lehibe loatra écouteur.
amin'ny ankapobeny Android 7.0 Nougat dia lehibe vaovao. Izany no mahatonga ny sasany fiovana manan-danja eo ambanin'ny nana izay manome tombontsoa ao anatin'izany ny bateria intsony ny fiainana. Ny sary tweaks no misoko mangina sy tena dia azo inoana fa ho misarontava ny customisations natao Android amin'ny antoko fahatelo-mpanamboatra.
Ny velona-valin fanampiny ny fampahatsiahivana te tokony ho nisy hatramin'ny voalohany. Fa angamba ny tsara indrindra tweak kely fa mpanamboatra rehetra dia tokony hanaraka izao dia ny fahafahana avo roa heny-tap ny Overview haingana bokotra mba hitsambikina eo amin'ny roa farany nampiasa fampiharana. Tena betsaka haingana kokoa noho ny bouncing ny sakafo sy miverina, ary tsy maka dexterity mihitsy hampavitrika.
Zavatra iray no azo antoka, na izany aza - raha tsy tia Android Marshmallow, Nougat tsy handeha hanao na inona na inona mba hanova ny sainao.
Rohy Google ny fitaovana, anisan'izany ny Rohy 6, 5X, 6P, 9 ary Rohy Player, ary koa ny Google Pixel C takelaka, dia hahazo ny fanavaozam-baovao ny-ny-rivotra manomboka amin'izao fotoana izao. V20 ny LG no ho voalohany finday avo lenta vaovao mba hanomboka amin'ny Nougat noho ny famotsorana tsy ho ela.
Google Android 6.0 Marshmallow famerenana: kokoa polished, fanaraha-maso sy lava kokoa ny fiainana bateria
43464	5 Alphabet, Android, Article, Google, Finday, Famerenana, Samuel Gibbs, Smartphone, Software, Tablet ordinatera, Teknolojia
← Dia ny Fitadidianao Ianao ho marina araka ny hevitrao no? Samsung Galaxy Note 7 Review →